Semalt Expert: Sei Ungaramba Wakachengeteka Kubva Botnets?
Indaneti yezvinhu (IoT) ndiyo inyanzvi itsva iyo inosungirirana kubatanidza zvinhu zvakasiyana siyana nezvimwe zvinhu kune internet. Inopawo ruzivo ruzivo rwekushanda zvakanaka kwekombiyuta yako kana foni. Mukurwisana kwemakwikwi emiti, vashandisi nevagadziri vakagadzira dzimwe nzira dzine ngozi, kusanganisira botnets - blue kelley blue book boats.
Artem Abgarian, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt , inotarisa pamusoro pekuti mabhenetsi iboka remakombiyuta akabatanidzwa neIndaneti kana mafoni esirivha anotungamirirwa ne-centralized server kana system. Iri izwi rinowanzoshandiswa mukubatana nemamwe mahedheni, kunyanya kuparadzirwa kwekupararira kwehutachiona hwehushandi (DDoS kushorwa).
Vanosekwa vanoita sei mabasa avo?
Nemubatsiro we botnets uye mazana kuzviuru zvemakombiyuta ane utachiona, vanokuvadza vanogona kutarisa IP yako kero. Vanoshandisa mazita avo eIndaneti akasiyana-siyana kuti vasiyanise vashandi vanokodzera uye vanonyengera. Pane imwe nguva vawana mahwendefa akasiyana-siyana emakombiyuta uye maIndaneti, chinangwa chavo chinotevera ndechokuti vabate mafaira aya kuti vaite mabasa avo chaiwo.
Ngozi # 1: Bvisa ruzivo rwako
Indaneti yezvinhu inogona kuvhara zvinyorwa zvako uye data yega yega nyore nyore. Vanoshanda pamwe kana kuti vasina kunze kwezvitsva zvakashata uye vanocherechedza mabasa enyu akanyarara. Kana uchinge wapinda kunze kwetsika yako, ivo vanobva vatanga kuita mabasa avo uye kusvuta chida chako pasina nguva..
Ngozi # 2: Zvigadzirwa zvisingadhura zvikuru maPc
Misika yakasvibiswa nemakombiyuta asingadhuri uye asingadhuri uye zvigadzirwa zvemagetsi, webcams, thermostats, yoga mats, fry pans uye vana vanoona. Iwe unofanirwa kudzivisa kutenga chinhu chisina kukwira kuchiratidzo, uye icho chiri chechirongwa chisingazivikanwi kana chisingazivikanwi. Ichi ndechokuti njodzi dzakasiyana-siyana dzinobatanidza nezviyero zvakadaro. Izvo zvipfeko zvinogona kunge zvichiita kuti vashandise kuburikidza nehana dzavo. Zvose izvi zvigadzirwa zvinofanira kushamwaridzana neIndaneti uye dzine IPs yakasiyana. Necho chiduku kana kwete chekuchengeteka, unogona kurasikirwa nekusvika kwako kune zvigadzirwa zvako, uye vanokuvadza vangave vachiba mabhizimisi emasikati nemapepiswedi pasina nguva.
Nengozi # 3: Hapana akachengetedzwa mukati-kusachengetedzwa - hapana kuwanikwa kune yako
Kuisa chirongwa chinorwisa-malware kana chirongwa chinonzi antivirus chinokosha. Iwe unofanirwa kuongorora mabasa ako paIndaneti uye uine mamwe mafaira ekuchengetedza. Ramba uine ziso pamusoro pekuchengeteka kwako uye usakanganwa kuvachengetedza. Uyewo, unofanirwa kuva neshoko rakasimba neshoko rakakura uye rakaderera kuitira kuti parege kuva nomunhu anogona kuzvifungidzira nyore nyore. Kudzoka muna 2016, mabhenetsiti akanganisa huwandu hwezvigadziri bedzi nekuda kwekuti mapepa emafaira aiva nyore kuzvifungidzira. Pakati pevhareji, zviyero zviuru gumi zveIoT zvakanyengedzwa uye zvakaendeswa kune vashandisi veIndaneti vanochengetedza. Kunyange mawebsite akaita se Twitter neNetflix akabatwa, uye vatengesi vakakurumidza kuparara kubva paIndaneti mushure mekuita mhosva.
Tsvina yakaita mabasa aya yakasikwa neine malware yakanzi Mirai. Iyi malware inokonzera kuba dzepachimbwa nedzimwe nyaya dzemapurogiramu ezvizhinji zvezvigadzirwa. Hakanga isiri nyanzvi yemarware, saka kuenzanisa nayo kwaive nyore kutorwa. DDoS kurwiswa kwakafanana nekupararira uye nguva dzose semabhoti uye tsanga. Vanopinda mumakombiyuta nemichina yekufambisa, vachikumbira vashandisi kuti vakwanise pamatsotsi ekutsvaga uye chengetedza mazano anobatana.